Qaban-qaabada shirka Isimada Puntland ee magaalada Qardho oo gebo-gebo maraya (Dhegeyso) – Radio Daljir
Luulyo 31, 2013 6:36 b 0
Qardho, July 31, 2013 – Magaalada Qardho ee xaruunta gobolka Karkaar wararka ka imanayaa waxay sheegayaan in ay heer gebo-gebo ah marayso qaban-qabada shirka Isimada Puntland, kaas oo la filayo in uu dhowaan ka dhaco xaruunta Karkaar.
Shirarka ay yeelanayaan guddiyada loo xir-saaray shirka Isimada ee Qardho ayaa maalmihii tegey halkaasi si habsami leh uga socday, iyagoo kaga tashanaya nooca shirka uu noqon doono iyo qaban-qaabada guud.
Guddiyada shirka qaban-qaabinaya ayaa haddaba maanta waxay shir ku qabteen Hotel Alla-Aamin ee Qardho, waxaana halkaasi lagu qeybiyey war-murtiyeed ka soo baxay guddiyada shirka abaabulaya, iyadoo war-bixintaas dadweynaha iyo buslhada qeybeheeda loo qeybiyey ay ku qornaayeen dhaliilaha wakhtigan ka jira Puntland.
Afhayeenka Guddiga qaban-qaabada Isimada Puntland Mustafe Siciid (Shabac) ayaa kadib war-murtiyeedkaas, wuxuu gudaha Hotelka ku qabtay shir jaraa?id oo uu ku iftiimiyey in isimadu ay ka shiri doonaan horumar la?aanta iyo dib u dhaca ku yimi Puntland sida uu hadalka u dhigay.
Tan iyo bishii hore ayaa abaabulka shirkaasi wuxuu ka socday magaalada Qardho, waxaase Wasaarada arrimaha gudaha ee Puntland ay ?hadda ka hor sheegtay in aysan waxba kala socon shirka Isimada ee ka dhacaya xaruunta gobolka Karkaar.
Dhegeyso – War-bixin ka hadlaysa shirka isimada, Muxyadiin Hiirad ayaa diyaariyey.
Wareega sadexaad ee Tartan iyo Tacliin oo xalay bilowday iyo Shaafici Bosaaso oo ka guulaystay Nugaal